WordPress: Ahoana ny fomba fampidinana sy fampidirana PDF | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 7, 2019 Alatsinainy Janoary 7, 2019 Douglas Karr
Ny fironana iray izay mitombo hatrany miaraka amin'ireo mpanjifako dia mametraka loharano ao amin'ny tranonkalany nefa tsy manery ny fanantenana hisoratra anarana hisintona azy ireo. PDF manokana - ao anatin'izany ny taratasy fotsy, fandinihana tranga, tranga fampiasana, torolàlana, sns. Mpanjifa vao tsy ela akory izay vao nanangana orinasa SaaS izay manolotra mandeha ho azy robotika manan-tsaina, Clear Software.
Ny tranokalan'izy ireo taloha dia nanana bokotra fampidinana izay azon'ny mpitsidika tsindriana ka avy hatrany dia misintona sy manokatra ny PDF. Mazava ho azy, azon'izy ireo natao ny nanitsy ny bokotra fisintomana tamin'ny fanarahan-dia hetsika ary avy eo nandinika ny valiny… saingy ny olana dia miasa amina votoaty marobe izy ireo ary mitaky fotoana fanampiny na kaody pejy lohahevitra manokana na manampy ny tagging hetsika ilaina isaky ny bokotra fampidinana.
Tsotra lavitra noho izany ny valiny. Raha nampiditra ny PDF tao anaty mpamaky PDF izahay, dia azontsika atao ny manara-maso ireo fijerena pejy toy ireo pejy hafa ao anatin'ny Google Analytics. Raha apetrakao ny PDF Embedder ho an'ny WordPress, azonao atao izany. Tena manana ohatra amin'ny antsika isika lisitry ny fanentanana amin'ny marketing. Ity misy toa azy ao anaty pejy:
DK New Media Taratasy fanombohana marketing
Misy fianakaviana plugins iray manolotra endrika vitsivitsy:
Fomba fiasa azo antoka ka mampandeha ny fampidinana.
Ny famindrana ny bokotra pagination sy ny fisintomana azo alaina tsy ho ambony na ambany amin'ny PDF.
Mampiseho ny menio PDF amin'ny hover na hita amin'ny fotoana rehetra.
Bokotra feno efijery.
Fampidirana thumbnail PDF.
Mijery sy misintona ny valiny amin'ny finday.
Rohy miasa ao anatin'ny PDF.
Tsy mila kaody na inona na inona, rehefa mampiditra PDF ianao dia miseho ho azy ao anatin'ny shortcodes!
Nampiasa an'ity plugin ity tamin'ny tranonkala marobe aho ary miasa tsy misy kilema. Mandrakizay ny fahazoan-dàlana ataon'izy ireo, noho izany dia nividy ilay fahazoan-dàlana feno ahafahako mampiasa azy amin'ny tranonkala maro araka izay tadiaviko. Amin'ny $ 50, be izany.
PDF Embedder ho an'ny WordPress
TSY rohy tohana na tohana izany. Te hampiroborobo fitaovana lehibe ho an'ny WordPress fotsiny aho!
Tags: Adobeahoana nomampiditra pdfPDFWordPress
Jan 3, 2011 ao amin'ny 3: 40 AM
@dknewmedia Misaotra anao tamin'ny lahatsoranao momba ny fomba fampidirana PDF! Mora ny manara-dia, niasa toy ny ody kanto ary ny tsara indrindra dia nanampy tamin'ny famahana olana izany. Bravo! Tohizo ny hafatra tsara.